सिरहा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा ७९ को मृत्यु - नेपालबहस
सिरहा । सिरहा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ११ महीनाको अवधिमा विभिन्न सवारी दुर्घटनामा परी ७९ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरी चलाएको बस, ट्रक, कार, जिप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनलाई कारवाही गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु एक करोड ५० लाख ६१ हजार जरिवानावापत राजश्व सङ्कलन भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानका ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक मनोजकुमार चौधरीले बताए।
ट्राफिक प्रहरी चेकपोष्ट
अघिल्लो लेखम्याग्दीको रघुगङ्गामा एक महीनादेखि वृद्धको ओढारमा बास !
अर्को लेखविजयपुर खोलामा बाढीले ह्युमपाइप बगाएपछि मालवाहक गाडी ठप्प !
प्रहरी बुलेटिन : कहाँ-के भयो ? [ थाहा पाउनुस ]
प्रहरी बुलेटिन : दशैँको बेला जुवातास खेल्ने १७ जना पक्राउ
सवारी दुर्घटना : ३ जनाको मृत्य, १ जना घाइते